Okthobha 2021 - Iphepha 2 of 22 - Funda ukurhweba
Inkxaso ephambili: 1792.50 - 185.90
Ukuchasana okuphambili: 1809.20
Igolide ibirhweba kuluhlu oluchazwe kakhulu ukusukela oko yaphuka kwinqanaba le-1787 ngoLwesihlanu odlulileyo. Eli nqanaba libeka i-downside kule marike.
Xa kujongwa isenzo samaxabiso embali, eli nqanaba laliyi-THE esisiseko kulo lonke uJulayi kwaye ibe linqanaba elibalulekileyo ukusukela oko.
Ulwakhiwo olukhawulezileyo luyi-bullish kwaye ikhandlela lokugqibela le-1H ligubungele amakhandlela eyure ezi-7 zokugqibela kwi-bounce ye-highs izolo.
UShiba Inu Utyumza iRekhodi ePhakamileyo phakathi kweSityhilelo se-Thinly-Distributed Supply
UShiba Inu (SHIB) urekhode i-rally engaqhelekanga kule veki njengoko ityumle irekhodi ephezulu emva kwerekhodi ephezulu. I-meme yesibini enkulu iprinte irekhodi elitsha eliphezulu izolo kwi-$ 0.00008854 ngaphambi kokurekhoda ukuhla kweedijithi ezimbini.
I-capitalisation yemalike ye-Shiba Inu isandula ukuwela i-40 yeebhiliyoni zeerandi, eyayityhalela kwinqanaba eliphezulu le-crypto elishumi kwaye yamnceda ukuba adlule kwi-meme coin eyandulela i-Dogecoin.
Nangona kunjalo, idatha yamva nje yokujikeleza ifuna isilumkiso malunga ne-SHIB. Okwangoku, imakethi igcwele kakhulu i-Shiba Inu eninzi ejikelezayo, ngaphandle komnikelo ka-Vitalik Buterin wamva nje we-1 yetriliyoni ye-SHIB kunye nesici sokunciphisa inethiwekhi.
Ngexesha loshicilelo, kukho ngaphezulu kwe-549 yeetriliyoni zeethokheni ze-SHIB ezijikelezayo, isixa esimnandi xa sithelekiswa neBitcoin kunye nezinye ii-cryptos ezininzi. Ngeli xesha, umnenga weBitcoin ngoku umi malunga ne-14.65%, inani elincinci xa lithelekiswa neShiba Inu.
Ngokwedatha evela ku-coincarp.com, abanini-10 banama-71.9% ayo yonke i-SHIB ejikelezayo. Okubangela umdla kukuba, ezinye zezi zipaji zeze-crypto exchanges njengeBinance kunye neCrypto.com. Kwakhona, ukuba udibanisa iidilesi ze-838,305 ze-SHIB, kuphela i-20 ilawula i-75.95% yokubonelela okujikelezayo. Ekugqibeleni, i-100 ye-wallet ephezulu ine-80.48% yazo zonke izinikezelo ze-SHIB.
Le datha ibonisa ukuba i-meme coin isasazwe ngokungalingani kangakanani kwaye iphantsi komngcipheko wokuphathwa kakubi.
Amanqanaba aphambili eShiba Inu ukubukela-Okthobha 29
I-SHIB iye yasebenza ingqondo kule veki njengoko ifikelele kwirekhodi entsha ephezulu kufutshane nokucima enye i-zero kwixabiso layo. Nangona kunjalo, i-cryptocurrency yesithoba inkulu yafumana ukulungiswa okubukhali ukusuka kwirekhodi entsha ephezulu ukuya kwi-0.0000600 yenkxaso.
Nangona kunjalo, iinkunzi zeenkomo ziye zala ukuphumla ekugwetyweni kwazo kwaye zonyusile ixabiso ukuya kwi-0.0000750 yokuxhathisa, apho izama ukuphuka. Ndilindele ukubona ukudibanisa okuzinzileyo phakathi kwe-$ 0.0000750 kunye ne-$ 0.0000600 kwixesha elisondeleyo njengoko ezinye ii-bearish undertones zihlala.
Okwangoku, amanqanaba ethu oxhathiso ayi- $ 0.0000750, $ 0.0000800, kunye ne- $ 0.0000885, kwaye amanqanaba ethu enkxaso aphambili ayi- $ 0.0000650, $ 0.0000600, kunye ne- $ 0.0000550.
Iimali ezinkulu zeShiba Inu Market: $ 39 billion
Ukulawulwa kweShiba Inu: 1.5%
Thumela iNtlanganiso ye-ECB, i-EURO Ihlala iPhakamileyo njengoko iDola iBuyisela ngaphantsi kwi-GDP Miss
Isiphumo sentlanganiso ye-ECB sasibalulekile njengoko bekulindelekile. Abaqulunqi bemigaqo-nkqubo bavumile ukuba ukunyuka kwamaxabiso bekuphezulu kunokuba bekulindelwe, kodwa banciphise imfuno yokunyusa amazinga ngokukhawuleza. Yonke imilinganiselo yomgaqo-mali wemali yahlala ingatshintshi, kunye nezinga lokubuyisela imali, izinga lokubolekwa kwe-marginal, kunye ne-deposit rate yonke engatshintshiyo kwi-0%, i-0.25 yeepesenti, kunye ne-0.5 ekhulwini, ngokulandelanayo. I-PEPP iqhubele phambili njengoko bekucwangcisiwe kwaye kulindeleke ukuba igqitywe ngoMatshi 2022. Emva kokuphela kwePEPP ngoMatshi 2022, intlanganiso kaDisemba iya kubona uqikelelo oluhlaziyiweyo lwezoqoqosho kunye nesibhengezo esisesikweni sesicwangciso sokufunyanwa kwempahla.
Njengoko urhwebo oluphakathi luqhubeleka, izibini eziphambili kunye neminqamlezo ziye zahlala zivaleleke kuluhlu lwayizolo. Inkomfa yabezindaba ye-ECB ijongeka ngathi iyinyusile i-euro ngandlel' ithile, kodwa akukho nto ilandelayo ngokuthenga. Idola nayo ibuthathaka ngandlel’ ithile emva kokukhululwa kweenkcukacha-manani ze-Q3 GDP ezimbi kakhulu kunokuba bekulindelwe. Ngeliso kwimvakalelo ebanzi yomngcipheko, iimali zeempahla zezona zithambileyo.
Emva kwenkomfa, i I-EURUSD inyuke kakhulu. Ngelixa ezinye zezi zinto zingabalelwa kwi-USD ebuthathaka emva kwezibalo ze-GDP ezimbi, imarike ayibonakali ichukumisekile yi-ECB's inflation forecast. Enyanisweni, ngokweenkcukacha zamva nje, ukunyuka kwamaxabiso eJamani kunyuke ukuya ku-+4.5 ekhulwini ngonyaka ngo-Oktobha, uninzi lwamashumi amathathu eminyaka, ukusuka kwi-4.1 ekhulwini kwinyanga engaphambili. Oku kwakuphezulu kunemvumelwano ye-4.4 ekhulwini.
Ngokubhekiselele kubuchwephesha, i-Euro iya kubuyela kwindawo ebonakalayo kuyo yonke iveki. I-rebound evela kwi-1.1523 iya kuqaliswa kwakhona ukuba ukuchasana okuncinci kwe-1.1668 kwaphukile. Ikhefu lenqanaba elincinane lokumelana ne-0.8467 kwi-EUR / GBP iphakamisa ukuhla kwexesha elifutshane kwi-0.8401. Kwi-EUR / AUD, ukuphulwa kokuchasana okuncinci malunga ne-1.5598 kuya kuphinda kubonise ukuchithwa kwexesha elifutshane kwi-1.5393. Ukuba onke la manqanaba aphukile, i-Euro iya kuba kwinqanaba lokukhupha i-rebound-based-rebound ye-rebound.
I-ECB igcina i-Stance, iQhuba i-PEPP ngeNqanaba eliQhelekileyo
Njengoko bekulindelekile, i-ECB igcine umgaqo-nkqubo wayo wezemali uzinzile. Isibonelelo esincinci sokuboleka imali kunye nenzala yesibonelelo sediphozithi iya kuhlala kwi-0.00 yeepesenti, i-0.25 yeepesenti, kunye ne-0.50 yeepesenti ngokulandelelanayo. Uqikelelo luhlala lungatshintshanga.
"IBhunga eliLawulayo lilindele ukuba imilinganiselo yenzala ye-ECB ihlale kumanqanaba akhoyo okanye aphantsi de ibone ukunyuka kwamaxabiso kufikelela kwiipesenti ezimbini ngaphambi kokuphela kombono wengqikelelo kunye nexesha elide kwintsalela yentelekelelo, kwaye igweba ukuba iqhubekile phambili. ekwenyukeni kwamaxabiso okusisiseko kuhambele phambili ngokwaneleyo ukuze kuhambelane nokunyuka kwamaxabiso kuzinzo kwiipesenti ezimbini kwixesha eliphakathi,” Ingxelo iyafundeka. Oku kunokubonisa ixesha elifutshane lokunyuka kwamaxabiso okungaphaya koko bekujoliswe kuko.”
Ukuthengwa kwe-PEPP kuya kuqhubeka kude kube sekupheleni kuka-Matshi 2022, kunye nexabiso elipheleleyo le-EUR 1850B. Ukuthengwa kwe-asethi yonke kuya kuqhubeka "cotha ngokuphakathi" kune-Q2 kunye ne-Q3. Ukuthengwa kwee-APPs nako kuya kuqhubeka ngexabiso lenyanga le-EUR 20 yeebhiliyoni.
tags I-European Central Bank (ECB)
I-AUDUSD Inyuka Ngokudlulileyo kwe-0.7550 Nangona Ukunyuka kwe-US T-Bond Izivuno
Uhlalutyo lwamaxabiso e-AUDUSD-Okthobha 28
I-AUDUSD ithengisa phezulu kwi-0.7554 ngexesha lokubhala, i-0.50 ipesenti ngexesha leseshoni yaseMelika. Kwixesha elikufutshane, isibini sinokuhla ngezantsi kodwa sihlala sithenga kwiidiphu. I-Index yeDola yase-US, elinganisa ukusebenza kwe-greenback, iwela ipesenti ze-0.6 ukuya kwi-93.30, nangona inyuka. US T-bond izivuno, kunye nenqaku le-benchmark yeminyaka eyi-10 ukunyuka kwamanqaku amathathu esiseko ukuya kwi-1.561 ekhulwini.
Amanqanaba okumelana: 0.7800, 0.7700, 0.7600
Amanqanaba enkxaso: 0.7450, 0.7350, 0.7220
Kwitshathi ye-AUDUSD yemihla ngemihla, sinokubona ukuba imiyinge ehambayo ye-5 kunye ne-13 ingaphantsi kwexabiso, elinika inkxaso. Iinkunzi nazo zibeke iliso kwinqanaba le-0.7555 lamva nje lokuphuma phezulu. Ngokumalunga nohlalutyo lobugcisa, ulwahlulo olulula ngaphaya kweenkunzi zenkomo eziqhubeka emantla.
Iimeko zeRelative Strength Index, kwelinye icala, zinokuba ngumngeni kwiinkunzi zenkomo emva koko ngenxa yeemeko ezithengwe ngokugqithisileyo. Kwi-downside, ilahleko zezibini ezingaphantsi kwe-0.7478 zingakhumbula abathengisi abajolise kwi-0.7450 inkxaso ye-convergence ukususela phakathi noJulayi, okubandakanya ukuhamba kwe-5 kunye ne-13 ngenkxaso ethe tye.
I-AUDUSD yexesha elifutshane kwiTrend: Bullish
Kwi-chart ye-4 yeyure ye-AUDUSD, i-rally ephezulu iyaqhubeka, kwaye i-intraday bias iqala ukubulisa. Ukuphulwa kwenqanaba lenkxaso ye-0.7478 kunokuthetha ukugqithiswa kwexesha elifutshane, kunikwe imeko ye-bearish divergence kwixesha elifutshane le-RSI kunye nexabiso.
Ukusombulula ipateni epheleleyo ye-0.7170 yokunyusa izinga, i-intraday bias ye-0.7450 yenkxaso yezinga iya kubuyiselwa kwi-downside kule meko. Nangona kunjalo, ukuba izinga lokuchasana le-0.7550 lizinzile, ukukhula kunokukhawuleza ukuya kwi-0.7600.
I-FTSE 100 (UKX) Iyancipha kwiNqanaba le-7200 ephantsi, i-Uprend mhlawumbi
I-FTSE 100 (UKX) inyuke yaya kutsho kwi-7281 yeedola. I-RSI ibonise ukuba imarike ifikelele kwingingqi ethengiwe kakhulu. I-UKX inqabile kodwa ibuyela umva. I-uptrend inokwenzeka ukuba iqhubeke. Okwangoku, ngo-Oktobha 15 uptrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-78.6% yenqanaba lokubuyisela i-Fibonacci. Ukubuyisela kubonisa ukuba i-UKX iya kunyuka kwinqanaba le-1.272 i-Fibonacci extension okanye inqanaba le-7329.09.
Isalathiso sikwinqanaba le-59 le-Relative Strength Index ixesha 14. Ibonisa ukuba ikwindawo ephakamileyo kunye nangaphezulu kwe-centerline 50. Kwakhona iyakwazi ukunyuka phezulu. Ii-SMA zeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 zithambekile ngokuthe tye zibonisa umkhwa. Ixabiso le-crypto lingaphezulu kwee-avareji ezihambayo ezibonisa ukunyuka okunokwenzeka.
I-FTSE 100 (UKX) yeXesha eliPhakathi leTrend: Bullish
Kwitshathi yeyure e-1, i-FTSE 100 ikwi-uptrend. I-UKX ngaphambili ibuyele kwinkxaso engaphezulu kwenqanaba le-7220. Okwangoku, isalathisi sidibanisa ngaphezu kwenkxaso yangoku. Ukuba ixabiso liphule ngaphezu kwee-avareji ezihambayo, imarike iya kuphinda iqalise ukunyuka. Isalathisi siya kuphinda sibuyele kwiindawo eziphakamileyo zangaphambili zezinga le-7280. Ukunyuka okuphezulu kujongene nokukhatywa kwinqanaba le-7240.
Isalathiso singaphezulu koluhlu lwe-25% yestochastic yemihla ngemihla. Amabhanti estochastic atyibilika ngokuthe tye ebonisa ukuba isalathiso sidibanisa ngaphezu kwenkxaso yangoku.
I-FTSE 100 (UKX) iphinda iqalise ukunyuka okutsha njengoko ixabiso lawela kwinqanaba eliphantsi langaphambili kwinqanaba le-7220. Abathengi banomsebenzi wokunyuka njengoko betyhala isalathisi ngaphezu kwee-avareji ezihambayo. Ngokutsho kwesixhobo seFibonacci, imarike iya kufikelela kwinqanaba eliphezulu le-7329.09
← Entsha izithuba 1 2 3 ... 22 abaDala izithuba →